Iincwadi ezili-10 Yonke intombazana ePreteen kufuneka ifundwe - Iincwadi
Diy Abahlobo Nosapho Iindaba Zefashoni Iimveliso Izixhobo Uphononongo Lweemovie Ulusu Abaphumeleleyo Imikhwa Amanqaku Omfazi Ombane
Iincwadi ezili-10 Yonke intombazana ePreteen kufuneka ifundwe
Ubungakanani bakho buye bahamba uharry Potter kwaye Imidlalo yokulamba, kwaye ngoku ufuna into entsha ukuba ayiqwenge. Ngenisa ezi ncwadi zilishumi zingakholekiyo eziza kukhuthaza, zonwabe kwaye mhlawumbi zimenze alile kancinci. (Kodwa ke, yabelana ngothando: Ezi ncwadi zihle kakhulu kuso nasiphi na isini.)
Ezinxulumene: Iincwadi zaBantwana eziGqwesileyo zaMinyaka yonke
Uqweqwe: IWendy Lamb Iincwadi / imvelaphi: ifc2 / Getty Izithombe
Senziwe sonke ngeeMolekyuli NguSusan Nielsen
UStewart, umntwana ongahlali kakuhle kodwa onesiphiwo esikhulu, kunye no-Ashley, intombazana eyaziwayo kakhulu enamabanga amabi, banyanzelwa ukuba bahlale kunye xa abazali babo betshata. Kuxelwe kwezinye iindlela zokutshintsha, eli bali lihlekisayo nelichukumisayo linento kuwo wonke umntu.
Uqweqwe: Iincwadi Ezincinci, Ezimdaka zaBafundi abaDala / iMvelaphi: ifc2 / Getty Izithombe
Into malunga neJellyfish Ngu-Ali Benjamin
Iinoveli ezingakumbi malunga nesayensi, utsho? Ngena kule ncwadi ibuhlungu malunga noSuzy, ocinga ukuba umhlobo wakhe osenyongweni akazange abulawe kwingozi yokurhaxwa kodwa walunywa yijellyfish enqabileyo. Ubungakanani bakho buqinisekisiwe ukuba butshayelwe kukhangelo lwakhe lweempendulo.
UStef Soto, uKumkanikazi weTaco NguJennifer Torres
U-Estefania Stef Soto uneentloni nguTia Perla, iloli yosapho lwetaco. Kodwa xa ishishini lisongelwa, uStef unyuka ukunceda ngeendlela ezimangalisayo (kunye nezikhuthazayo). Ukufezekisa usomashishini wakho omncinci.
Uqweqwe: IiNkonzo zeDijithali zeAlgonquin / imvelaphi: ifc2 / Getty Izithombe
Intombazana eyasela iNyanga nguKelly Barnhill
Eli bali limnandi lamagqwirha kunye nomlingo liphumelele imbasa yeNewbery, ke uyazi ukuba kulungile. Abalishumi elinesibini bakho baya kulithanda ibali likaLuna, oneminyaka eli-13 ubudala kunye namandla angaqhelekanga akhokelwa ligqwirha elilungileyo.
Uqweqwe: UAlfred A. Knofp / Random House / uMva: ifc2 / Getty Izithombe
Stargirl NguJerry Spinelli
Ukubiza bonke abavukeli. I-Stargirl, i-trendsetter yamagnetic, yiyo yonke into eMica High eza kuthetha ngayo xa iqala ukungena-ngakumbi uLeo. Kodwa xa bemvulela ngokwahluka, uLeo uyamqinisekisa ukuba uqhelekile, into enokumtshabalalisa.
Uqweqwe: IHarperCollins / imvelaphi: ifc2 / Getty Izithombe
Ibhulorho eya eTerabithia nguKatherine Paterson
Isilumkiso: Le ncwadi mayifundwe nezicwili. Eli liphumeleleyo eNewbery libali likaJess, oba ngumhlobo okhawulezayo nentombazana entsha, uLeslie. Ngokudibeneyo, benza umhlaba omnandi ehlathini-kodwa xa kusenzeka intlekele, uJess kufuneka ajongane nenyani kwaye alwe nentlungu yakhe.
Uqweqwe: uHarper / uMva: ifc2 / Getty Izithombe
Le klassic monumental kungenzeka ukuba ifundiswe kwisikolo somntwana wakho, kodwa kufanelekile ukuba ifundwe ekhaya kuqala. Iziganeko zeGem kunye ne-Scout ngokuchasene nomva kwetyala likatata wabo zisabambelele njengobugcisa obuchukumisayo nobuphethe ipolitiki.
Ezinxulumene: Iifilimu ezingama-27 eziBalaseleyo zeNtsapho ngalo lonke ixesha
Uqweqwe: I-Quartet yoMnikeli / uMva: ifc2 / Getty Izithombe
UMniki NguLois Lowry
Ukuba iintliziyo zakho eziphakathi kweentsomi zedystopi, yigqithise le yakhe, stat. Xa uJonas ejika i-12, unikwe isabelo sobomi bakhe njengoMamkeli weMemori. Kodwa xa uqeqesho lwakhe luqala, kuya kufuneka ahambisane neemfihlo zobumnyama azifundayo. Le iyashukumisa kwaye ayilibaleki.
Hamba iinyanga ezimbini NguSharon Creech
Xa uSal esiya kuhambo lokundwendwela ilizwe liphela kunye nomakhulu notatomkhulu wakhe ukuba afumane ilifa lakhe laseIndiya, ubonwabisa ngebali lommelwane wakhe, uPhoebe Winterbottom. Kodwa xa uSal evula, elakhe ibali liqala ukuvela. (Umntwana wakho uya kuhlala elele ubusuku bonke efunda le.)
NdinguMalala (uHlelo lwaBafundi abaDala) ngu-Malala Yousafzai kunye noPatricia McCormick
Olu hlobo luguquliweyo lweememoir ezinamandla zeNobel Peace Prize yinto ekufuneka uyifundile. UMalala okhaliphileyo uxela amava akhe aphila phantsi kolawulo lweTaliban kwaye wadutyulwa xa ebuya esikolweni. (Kwaye ngelixa egalela olu hlelo, landa oyena mntu mdala uthengayo ngokwakho.)
Ezinxulumene: Iincwadi ezili-10 Wonke umntu oFikisayo kufuneka afunde
Izigaba Kwiindaba Ukulungiswa Kwangoko Ukuhombisa
imifanekiso yeengcaphuno zabahlobo abasenyongweni
iilokhwe zebusti enzima
indlela yokuthwala isikhafu entloko
hollywood Iimuvi zothando
I-yoga ye-tantric ibeka izibini
Ukuphulukana neenwele kwabasetyhini kunyango lwendalo
umthambo ukunciphisa isisu ekhaya